Android 12 waxay soo bandhigi doontaa ogeysiisyada marin u helka kumbuyuutarka sida iOS 14 | Wararka IPhone
Muddo bil ka badan, betasyada ugu horreeya ee Android 12 ayaa hadda la heli karaa sidaa darteed isticmaale kasta ayaa ku rakibi kara qalabkooda illaa inta ay ka mid tahay moodooyinka la jaan qaadaya. Maaddaama Google ay sii deynayso betas cusub, waxaa la soo saaray astaamo cusub oo isku dayi doona in nolosha loo fududeeyo dadka isticmaala Android.
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee ka iman doona gacanta Android 12 Waxay aad ugu egtahay ta Apple ay ku soo bandhigtay iOS 14. Waxaan ka hadlayaa araajida marin u helka sabuuradda. Sida ay sheegeen wiilasha Soosaaraha XDA Android 12, waxay soo bandhigi doontaa ogeysiis marka codsi soo galo boodhka
Apple waxay ku soo bandhigtay macruufka 14 ogeysiinta dusha sare ee shaashadda taas oo ku wargalinaysa isticmaaleyaasha marka codsi marin u helo waxyaabaha horey u awooday nuqul nuqul. Astaantani waxay ahayd mid ka mid ah astaamihii ugu horreeyay ee diirada saara asturnaanta ee Google u muuqato inay jeceshahay.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in doorashadan waxay noqon doontaa ikhtiyaar Sida laga soo xigtay ragga ka socda XDA Developers, oo ka duwan iOS 14 iyo iPadOS 14, halkaasoo ikhtiyaarkan lagu shaqeysiiyo asal ahaan isla markaana aan la demin karin wakhti kasta. Marka loo eego sharaxaadda shaqadan, markii ikhtiyaarka ah "Show clip access" la hawlgeliyo, waxay tusi doontaa farriin markay barnaamijyadu marin u helayaan qoraalka la soo guuriyay, sawirka ama waxyaabaha kale.
Tan iyo markii Apple ay soo bandhigtay muuqaalkan, codsiyo badan ayaa lagu qasbay inay isku dayaan inay caddeeyaan marin u helkooda isagoo sheegaya inuu ahaa bug, sida TikTok iyo Reddit iyadoon la sii soconin.
Muuqaal kale oo sidoo kale u imanaya Android 12 oo Apple ku soo bandhigay nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee iOS, ayaa ah helitaanka kamaradda iyo makarafoonka iyada oo loo marayo dhibic cagaaran ama oranji ah oo lagu muujiyay shaashadda dusheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android 12 waxay soo bandhigi doontaa ogeysiisyada marin u helka kumbuyuutarka sida iOS 14
Mar labaad warka ku saabsan 15 kaamirooyinka muraayadaha Apple AR